Latest Myanmar News - Page 220 of 240 - News & Media
နေ့အပူရှိန်များဆက်လက်မြင့်တက်လျှက်ရှိရာ သတိပြုနေထိုင်ကြရန်လိုအပ်လာပြီဖြစ်သည် ။ အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ C အထိ တက်လာပါပြီ။ ဒီအတိုင်း ဆက်တက်နေရင် ၄၅-၄၇C အထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် တက်နှုန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ယခင်က ၁’C တက်ဖို့ကို ၁၀ နှစ် ကြာပါတယ်။ အခု ၃ နှစ် အတွင်း ၂`C တက်လာပါတယ်။ အပူချိန် ၁C တက်လာတိုင်း ပျမ်းမျှအသက် ၂ နှစ် လျော့စေပါတယ်။ သတိထားကြပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ ပျမ်းမျှ အသက်ဟာ ကျား ၅၃ ၊ မ ၅၇ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အပူချိန် ၂C တက်လာမှုကြောင့် ၄ နှစ် ထပ်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ စိုထိုင်းဆလည်း အရမ်းလျော့နည်းနေပါတယ်။ … Read more
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုလှသော ကနဖော့ရွက်
ဦးနှောက်ပူခြင်း၊ဖောရောင်ခြင်း၊နာဗ်ကြောနှင့် အကြောရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် “ကနဖော့ပင်” ကနဖော့ပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြား ရွှံ့နွံများ၌ပေါက်ရောက်သည်။ ဆီးပူညောင်းကျ ကနဖော့ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့်စပ်သောက်ပါက ဆီးပူညောင်းကျနာပျောက်၏။ ဦးနှောက်ပူခြင်း ကနဖော့အရွက်များကြိတ်၍ဦးခေါင်းတွင်အုံပေးပါ ဦးနှောက်ပူခြင်းကိုအေးစေ၏။ ဖောရောင်ခြင်းအတွက် ကနဖော့၊ငါး​ကြင်း၊ မန်ကျည်းမှည့်နှင့်် ချဉ်ဟင်းချက်စားပါ။ အစိမ်းဖော ကိုယ်ရောင် ကနဖော့ပြုတ်ရည်ဖြင့်ချိုးပါ။ နှာစေးပါက ကနဖော့ရွက်ကိုကြော်ချက်စားပါ။ ကိုယ်အရေပြားရောဂါ ကနဖော့ရွက်ကို ဆိတ်အချင်း၊သံပရာရည် ချဉ်ချဉ်နှင့်ချက်စားပါ။ အပူလောင်နာ ကနဖော့ရွက်ကို ကျွဲသားဖြင့်ချက်စားပါကအပူလောင်နာပျောက်သည်။ သည်းခြေပျက်ရောဂါ ကနဖော့ရွက်ကို ကြက်အသည်းအမြစ်နှင့်ချက်စားပါကသည်းခြေပျက်ရောဂါပျောက်ကင်းသည်။ သလိပ် ကနဖော့ရွက်သတ္တုရည် ကို ချင်း၊ထန်းလျက်ပြုတ်ရည်နှင့်ရောစပ်သောက်ပါ။ အကြောတက်ရောဂါ ကနဖော့ သတ္တုရည်ကို နွားနို့ ထန်းလျက်နှင့်ခပ်သောက်ပါ။ ဆိတ်နို့ထန်းလျက်နှင့်ကျိုသောက်လျင် အကြောပြေသည်။ နာဗ်ကြောအားကောင်းစေရန် ကနဖော့သတ္တုရည်ကို ပျားရည်နှင့်စပ်သောက်ပါ။ ကာမအားစွမ်းစေရန် ကနဖော့ကို ထောပတ်နှင့်ကြော်စားပါ။ ကနဖော့သည် အကြောရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက်ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေကြည်လင်လှပစေရန်ကနဖော့ရွက်အစိမ်းနုပ်နုပ်စင်း၍သုပ်စားနိုင်ပါသည်။ ကနဖော့ရွက်ကိုဘဲသားနှင့်ချက်စားပါကကိုယ်သားကိုယ်ရေအေးစေသည်။ … Read more
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၀-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၀-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်အဖြစ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၀) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁၅) ခု၊ စုစုပေါင်း (၂၀၅)ခုကို စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၂)ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၁၀-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၈၀) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၌ (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ … Read more
အိမ်သစ်၊ ကျောင်းသစ် ဆောက်တဲ့အခါ သတိပြုစရာလေးများ
နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်(တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့သိမ်းထားခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီ။) ဆရာကြီးဒဂုန် ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း တွေ့မိလို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထဲက အ်ိမ်ဆောက်ရင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိန်ိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်ဆရာ ပါ။သူရေးခဲ့တဲ့ စာစုကို ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ါ ဝေဒင်္ဂင်္တို့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ စား-၀တ်-နေ-ရေး ကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီ စား-၀တ်-နေ-ရေး ဆိုတဲ့ စကားလေး သုံးခွန်းဟာ နှုတ်ကပြောရာမှာ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်် သေသေချာချာ တွေးကြည့်လေ လေးနက် ကျယ်ပြန့်လေပါပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှမစားလို့ မ၀တ်လို့၊ မနေလို့ ရလို့လား၊ မစားဘဲ၊ မ၀တ်ဘဲ၊ မနေဘဲ ရနိုင်ရိုးလား။ ရှာရ၊ ဖွေရ၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေ၇တာ၊ မပြောချင်၊ မဆိုချင် မဆက်ဆံချင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာ တွေဟာ အဲဒီစားဝတ်နေ ဆိုတဲ့ ဟာကြီးကြောင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီပီပီပြောရရင် ခန္ဓာအိမ် ရှိသရွေ့ စားနေရ၊ … Read more
ဒူးရင်းသီး စားတဲ့အခါ သတိပြုရန်
ဒူးရင်းသီး ကြိုက်သူများ သတိပြုစရာ အသွားမတော်တစ်လှမ်း အစားမတော်တစ်လုတ်’ ဆိုတဲ့စကားပုံဟာ အစားအသောက် စားသုံးရာမှာ အခန့်မသင့်ရင် ဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရာသီစာဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာ အစားမတတ်ရင်ဘေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဆိုတာက အသီးတကာတို့ရဲ့ဘုရင်လို့တင်စားရလောက်အောင် အနံ့အရသာ ပြည့်စုံရုံမျှမက အားအင်ဖြစ်စေနိုင်သော သစ်သီးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံ တို့မှနေပြီးအများဆုံးထွက်ရှိကာ လူကြိုက်များသော သစ်သီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဟာ စားတတ်ရင်အားအင်ဖြစ်ထွန်းသလို မစားတတ်ရင် မြွေထက်တောင် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အသီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးကိုို စားသုံးပြီး ၈-နာရီအတွင်း နို့ထွက်အစားအသောက်များကို မစားသုံးဖို့ တိုိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ထို့အပြင် ဒူးရင်းသီးနှင့်အတူ တွဲဖက်မစားသင့်တဲ့ အစားအသောက်များကတော့ အရက်၊ ကိုိုကာကိုလာ နှင့် လိုင်ချီးသီးများဖြစ်ပြီး စားသုံးမိပါက အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ် လုို့ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ?ဗဟုသုတ ရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဒူးရင်းသီးနှင့်အရက်တွဲဖက်မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နှစ်ခုစလုံး … Read more
သရက်သီးအစေး၏အန္တရာယ် သရက်သီးအစေးက အန္တရာယ်ပေးတတ်ပါတယ် ။သရက်သီးရဲ့ အညှာဘက်ကို ဓားနဲ့လှီး ထွက်လာတဲ့အစေး mango sap ထဲမှာ စေးပျစ်နေတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ Urushiol အူယုရှီယော လို့ခေါ်ပါတယ် – အဲဒီ ဓာတ်ပစ္စည်းဟာ ထိတွေ့တဲ့လူရဲ့ အရေပြားကို ရောင်ရမ်းစေပါတယ်။ Contact dermatitis ပြီးရင် ယားယံစေပြီး အရေကြည်ဖုတွေ ထွက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစေးတွေရှိတဲ့ထိပ်ပိုင်းကို ဓားနဲ့လှီးထုတ်ပစ်ပြီးမှစားရပါတယ်။ အူယုရှီယော ဆိုတာက ဂျပန်စကားဖြစ်ပြီး ယွန်းထည် Lacquerware ပြုလုပ်ရာမှာ ပြုလုပ်ရာမှာသုံးတဲ့သစ်စေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သစ်စေးထုတ်တဲ့အပင်ကိုတော့ Toxicodendron vernicifluum (Urushi) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အူယုရှီယောအစေးတွေဟာ အဝါရောင်ရှိပြီး ရေမှာပျော်ဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အယ်လ်ကိုဟောလ်. အီသာ. ဘင်ဇင်းတို့မှာသာ ပျော်ဝင်ပါတယ်။ သူဟာ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ … Read more
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ကွာရှင်းခြင်းနှင့် ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းအကြောင်း… အပိုင်း(၃) ​ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လင်မယားတို့သည် ပစ္စည်းခန်း၌ အတူပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြသော်လည်း လင်ခန်း၊ မယားခန်း မပြတ်စဲဘဲ တည်မြဲနေစဉ်ကာလအတွင်း လင်ကဖြစ်စေ၊မယားကဖြစ်စေ ပစ္စည်းခွဲဝေပေးစေလိုမှု မစွဲဆိုနိုင်ပါ။ ထို့​ကြောင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လင်နှင့်မယားတို့သည် မောင်နှံပိုင်ပစ္စည်းကို အတူပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်၍ နှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းများကို နှစ်ဦးသဘောတူညီချက် ရလျှင် လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချ၊ပေါင်နှံ ၊ပေးကမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း လင်ဖြစ်စေ၊ မယားဖြစ်စေ တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီမှု မရလျှင် နှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းကို ရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ ၊ လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိပါ။သို့ရာတွင် လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းမှ မိမိ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပြုလိုရာ ပြုခွင့်ရှိ ကြောင်း နှင့် သဘောတူညီချက် ဆန္ဒကို အထင်အရှား မဟုတ် သော်လည်း … Read more
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၉-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၉-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၈) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၅) ခု၊ စုစုပေါင်း (၂၇၃)ခု တွင် – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁)ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ရာ (၉-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၇၈) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၌ (၂) ကြိမ် … Read more
F l uar i x တုတ်ကွေးဆေးအား အန္တရာယ်ရှိဆေးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းသတ်မှတ်လိုက်ပြီ
နာမည်ကြီးတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို အန္တရာယ်ရှိဆေးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းသတ်မှတ် တုတ်ကွေးကာကွယ်တယ်ဆိုပြိး အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ F l uar i x Tetra 2020 ဆေးကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းက သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ F l uar i z Tetra 2020 ဆေးရဲ့တန်ဖိုးဟာ ကျပ်လေးသောင်းဝန်းကျင်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ခေတ်စားနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့််အားကစားဝန်ကြီးဌာနက စစ်ဆေးခိုင်းထားတဲ့ F l uar i z ဆေးဟာ အရောင်အသွေး အာနိသင်အာမခံချက်မရှိတဲ့အပြင် မှားယွင်းသုံးစွဲမိရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ Wenews Unicode နာမညျကွီးတုတျကှေးကာကှယျဆေးကို အန်တရာယျရှိဆေးအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျးသတျမှတျ တုတျကှေးကာကှယျတယျဆိုပွိး အှနျလိုငျးမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ … Read more
← Previous Page1 … Page219 Page220 Page221 … Page240 Next →